Dai 1, 2022 by Justin26
Vazhinji vedu vanoshandisa yedu smartphones kutora mafoto uye kana uri chero sesu, ungangove uine zviuru zvemifananidzo pamudziyo wako. Kune vashandisi veIOS, mafoto aya anongofaya muApple Photos app, inowanikwa pa iPhone, iPad uye Mac.
Zvinogoneka kushandisa yechitatu bato app - senge Google Photos - asi kune avo vanonamatira neyako Apple Photos app, ichi chimiro chinokutungamira kuti uwane zvakanyanya kubva pachiri pa iPhone yako.
Kufambisa iyo Apple Photos app
Iyo Apple Photos app ine mana ma tabo pa iPhone: Raibhurari, Kwauri, Albums uye Tsvaga.
Raibhurari: Inopa mafoto ese pane chako kifaa. Kubva pane iyi tebhu, unogona kufarira mafoto, kudzima mafoto, kuviga mafoto, kugadzira maalbum uye kuona mafoto ako masikati, mwedzi kana gore.
Zvako: Inoratidzira yako Yekurangarira, Yakagovaniswa Album chiitiko uye yakanakisa nguva kubva kuraibhurari yako, yakarongedzwa neApple. Iwe zvakare uchawana mazano nezvemamwe mafoto anogona kutaridzika zvirinani aine mhedzisiro, zvakare Yakagoverwa Newe mapikicha uye mamwe mafoto ane kurudziro yekugovana kune dzimwe shamwari kana mhuri, zvichienderana nekuti ndiani ari mumifananidzo.
Albums: Inoratidza ese maalbum awakagadzira, uye ayo akagadzirirwa iwe - akadai Instagram uye WhatsApp. Ndiko zvakare kwaunowana Akagovaniswa MaAlbum, Vanhu uye Nzvimbo maalbum uye rondedzero yeMedia Types, inopa kukurumidza kuwana kune ako ese mavhidhiyo, akavanzika mafoto kana zvidzitiro, semuenzaniso.
Search: Inokutendera kuti utsvage mafoto ako nekunyora zvinhu zvakaita se'Holiday' kana 'Concert', asi unogona zvakare kutsvaga neVanhu neNzvimbo zvakare, pamwe nemubatanidzwa.
Apple Photos general matipi uye matipi
Maitiro ekuwedzera iyo Photos widget kune yako skrini yekumba
Kuwedzera iyo Mapikicha widget kune yako skrini yekumba inopenya zvishoma nezvishoma mumafoto apfuura zuva rese. Irwo rwendo rwakakura kudzika ndangariro.
Bata pasi paSikirini Yemba yako kusvika maapps azunguza> Tinya “+” mukona yekuruboshwe> Sarudza Mapikicha mune rondedzero yeWidgets> Dzvanya Wedzera Widget> Tinya Zvaitwa mukona yekurudyi yeSikirini Yemba yako.
Maitiro ekuwedzera kapu kumufananidzo paApple Photos
Iwe unogona kuwedzera chinyorwa kumifananidzo muApps app, uye zvinyorwa zvichawiriranisa pane yako Apple zvishandiso, ukuwo uchitsvaga.
Vhura iyo Mapikicha app> Vhura iyo foto yaunoda kuwedzera caption ku> Swipe kumusoro pamufananidzo> Wedzera chinyorwa. Bhokisi remashoko riri nyore kupotsa. Yaita grey kunze, pasi pemufananidzo.
Maitiro ekufarira mufananidzo paApple Photos
Kana iwe uchifarira mufananidzo, unozoonekwa muchikamu cheAlbum cheApps app muFavorites folda, zvichikubvumidza kuti uiwane zviri nyore.
Vhura Apple Mapikicha> Tinya paLibhurari tebhu pazasi kuruboshwe> Tinya pamufananidzo waunoda kufarira> Tinya pamwoyo pazasi.
Maitiro ekudzima mafoto paApple Photos
Kana ukadzima foto, inozoonekwa muchikamu cheAlbum cheApps app mukati Ichangobva Kudzimwa. Mushure memwedzi, mafoto ari mune iyi folda anozodzima otomatiki asi kusvika ipapo, unogona kuadzosera.
Vhura Apple Mapikicha> Tinya paLibhurari tebhu pazasi kuruboshwe> Tinya pamufananidzo waunoda kudzima> Tinya pabhini riri pakona yekurudyi> Delete Photo.
Maitiro ekudzima akawanda mafoto kamwechete paApple Photos
Sezvakaita nekudzima foto imwe, akawanda mafoto aunodzima anozoonekwawo muIchangobva Kudzimwa folda yechikamu cheAlbum cheapp. Kudzima mafoto akati wandei kamwechete:
Vhura Apple Mapikicha> Tinya paLibhurari tebhu pazasi kuruboshwe> Tinya 'Sarudza' mukona yekurudyi> Tanga kusarudza mafoto aunoda kudzima> Tinya bhini riri pazasi-kurudyi kona> Delete [x] Mapikicha.
Tip: Kana mafoto auri kusarudza ari padhuze nemumwe, unogona kuasarudza nekukasira nekutsveta chigunwe chako pachiratidziro chako usingachisimudze.
Maitiro ekuviga mufananidzo paApple Photos
Zvinogoneka kuvanza foto paApple Photos, zvichireva kuti inongoonekwa muYakavanzika Mafoto folda muchikamu cheAlbum uye kwete muraibhurari yako huru.
Vhura Apple Mapikicha> Tinya paLibhurari tebhu pakona yezasi kuruboshwe> Tinya pamufananidzo wauri kuda kuviga> Dzvanya iyo Govera icon (square ine museve) mukona yepasi kuruboshwe> Skroka pasi kuti 'Viga' mukati meiyo yepasi sarudzo. .
Maitiro ekuviga iyo yakavanzika mafoto album paApple Photos
Kana iwe usingade iyo yakavanzika mafoto albha kuti ioneke pasi peiyo maalbum tab, unogona kuiviga asi unozofanirwa kuiburitsa zvakare kuti uvhure folda uye uone iyo mifananidzo.
Vhura Zvirongwa pane yako iPhone> Skroka pasi kuenda kuMapikicha> Untoggle Yakavanzwa Album.
Maitiro ekugovera foto kana akawanda mafoto paApple Photos
Kugovera foto kana akawanda mafoto kuburikidza neMapikicha app iri nyore.
Vhura iyo Photos app> Tinya paLibhurari tebhu pazasi kuruboshwe> Tinya 'Sarudza' mukona yekurudyi> Sarudza mafoto aunoda kugovera> Dzvanya iyo Govera icon (square ine museve) pazasi kuruboshwe rwechidzitiro chako> Sarudza sevhisi kana app yaunoda kugovera mafoto ako uchishandisa.
Iyo Photos app ichapawo vamwe vanhu vaungade kugovera seti yemafoto navo, uku ichikubvumidza iwe kugovana nevamwe vanhu, uchitumira chinongedzo muMessage. Kana iwe ukabaya Sarudzo kumusoro kwechiratidziro chako, unogona kusarudza pakati pekutumira mufananidzo seotomatiki, mufananidzo wega kana iCloud link.
Kana iwe uri kugovera neAirDrop, kubaya Sarudzo kumusoro kwechiratidziro chako kuchakubvumidza kuti uchinje pa'All Photos Data' kuti utumire iwo emhando yemifananidzo, pamwe nenhoroondo yekugadziridza uye metadata.
Govera kana Wedzera kuAlbum nekukurumidza paApple Photos
Iyo Photos app inoronga mafoto nemazuva, ichipawo ruzivo rwenzvimbo kana nzvimbo yako yakabatidzwa. Paunenge uri mukutarisa kwezuva nezuva, unogona kusarudza zuva rese remifananidzo yekugovera kana kuwedzera kune imwe albhamu nekukurumidza.
Vhura iyo Photos app> Tinya paLibhurari tebhu pazasi kuruboshwe> Tinya pa'Mazuva'> Tinya 'Sarudza' mukona yekurudyi> Tinya 'Sarudza Zvese' pamazuva emifananidzo yaunoda kugovera, kudzima kana kuwedzera. kune imwe albhamu> Tinya pane Govera icon pakona yepasi kuruboshwe> Skroka pasi kuti usarudze zvaunoda kuita.
Shandisa 3D Kubata/Haptic Kubata kuti uone mufananidzo kana uri pakusarudza maitiro
Unogona kunge watanga kusarudza mifananidzo yekudzima, kugovera kana kuwedzera kualbum asi une maviri akafanana uye hauna chokwadi chekuti ndeipi iri nani yekusarudza.
Panzvimbo pekubuda mune yakasarudzwa modhi, kana iwe uine iPhone ine 3D Touch kana an iPhone ine Haptic Touch, unogona kubatirira papikicha yepikicha yaunoda kuona uchiri mune yakasarudzwa mode. Izvi zvinounza iyo mufananidzo kumusoro pachiratidziro kwenguva yakareba iwe uchiramba wakabatirira pasi pachiratidziro chako. Kana wangorega kuenda, unodzokera kwawakasiira mune yakasarudzwa mode.
Tinya paLibhurari tab kuti udzokere kumifananidzo ichangoburwa
Kana iwe wakakwira kumusoro nemapikicha ako uye iwe uchida kudzokera kumifananidzo yako yazvino, ingobaya iyo Library tebhu pakona yezasi yekona zvakare uye inozodzosera kumashure kune ako achangoburwa mapfuti.
Tsvaga rumwe ruzivo nezve chirimwa, chipfuyo kana chinhu
Pane Kutarisa Kumusoro chimiro muApple Mapikicha izvo zvinokutendera iwe kuti uwane rumwe ruzivo nezve rudzi kana imbwa kana katsi semuenzaniso, kana rudzi kana ruva kana chiratidzo.
Tinya paLibhurari tebhu uye vhura iyo foto yechinhu chaunoda kuwana rumwe ruzivo nezve. Kana Kutarisa Kumusoro kuripo, pachava ne "i" pazasi pechifananidzo chine nyeredzi mbiri padivi payo. Tinya pane ichi chiratidzo uye tinya Tarisa kumusoro.
Maitiro ekuona ako Aunofarira mafoto paApple Photos
Vhura iyo Photos app> Sarudza iyo Albums tebhu> Sarudza Favourites. Kana iwe usingazvione, sarudza 'Ona Zvese' mukona yekurudyi uye ichaonekwa mune yako runyorwa rwealbum.
Maitiro ekuona ako ese mavhidhiyo nekukurumidza paApple Photos
Vhura iyo Mapikicha app> Sarudza iyo Albums tebhu> Skira pasi kuMedia Types> Sarudza Vhidhiyo. Unobva watorwa kumavhidhiyo ako ese.
Kana iwe uchida kugovera, kudzima kana kuwedzera vhidhiyo kualbum, tinya 'Sarudza' mukona yekurudyi uye sarudza mavhidhiyo ako achiteverwa neinomiririra icon pazasi pechidzitiro. Shandisa chiratidzo chekugovana kuwedzera kune albhamu.
Maitiro ekuona ako ese skrini nekukurumidza paApple Photos
Vhura iyo Mapikicha app> Sarudza iyo Albums tebhu> Skira pasi kuMedia Types> Sarudza Screenshots. Iwe unozotorwa kune ako ese skrini.
Kana iwe uchida kugovera, kudzima kana kuwedzera skrini kune albhamu, tinya 'Sarudza' mukona yekurudyi uye sarudza zviratidziro zvako zvichiteverwa neiyo icon pazasi pechidzitiro. Shandisa chiratidzo chekugovana kuwedzera kune albhamu.
Maitiro ekuona ako selfies nekukurumidza paApple Photos
Vhura iyo Mapikicha app> Sarudza iyo Albums tebhu> Skira pasi kuMedia Types> Sarudza Selfies. Iwe unozotorwa kune ako ese maselfies.
Kana iwe uchida kugovera, bvisa kana wedzera selfie kualbum, tinya 'Sarudza' mukona yekurudyi uye sarudza ma selfies ako achiteverwa neinomiririra icon pazasi pechidzitiro. Shandisa chiratidzo chekugovana kuwedzera kune albhamu.
Maitiro ekuona Achangobva Kudzimwa Mapikicha paApple Photos
Vhura iyo Photos app> Sarudza iyo Albums tebhu> Skira pasi kune Zvishandiso pazasi pechidzitiro> Tinya paZvichangobva Kudzimwa.
Iwe unozogona kuona ako ese achangodzimwa mafoto, pamwe nenguva yakareba sei asara asati adzimwa zvachose.
Maitiro ekudzima zvachose mafoto paApple Photos
Kana ukangodzima foto kubva muraibhurari yako, inoenda kune Ichangobva Kudzimwa folda, kwainozogara kwemazuva makumi matatu. Iwe unozofanirwa kupinda mune iyi folda kuti udzime zvachose mufananidzo kubva pafoni yako.
Kuti udzime mafoto ese ari muFolda Ichangobva Kudzimwa, tinya 'Sarudza' mukona yekurudyi, ichiteverwa ne'Delete All' muzasi kuruboshwe.
Iwe unogona zvakare kusarudza mamwe mafoto ekudzima. Mushure mekudzvanya 'Sarudza', tora mafoto aunoda kudzima wodzvanya 'Delete' pazasi pechidzitiro chako.
Maitiro ekudzoreredza mafoto akadzimwa paApple Photos
Une mazuva makumi matatu ekuwanazve mafoto akadzimwa mushure mekunge waadzima kubva muraibhurari yako nekuda kweiyo Ichangobva Kudzimwa folda. Mushure memazuva makumi matatu, mafoto anobviswa otomatiki uye ndizvozvo. Kana iwe ukadzoreredza foto, inodzokera muraibhurari yako yemifananidzo.
Kuti udzore mafoto ese ari muFolda Ichangobva Kudzimwa, tinya 'Sarudza' mukona yekurudyi, ichiteverwa ne'Dzora Zvese' muzasi kurudyi.
Iwe unogona zvakare kusarudza mamwe mafoto kuti udzore. Mushure mekudzvanya 'Sarudza', tora mafoto aunoda kupora uye wodzvanya 'Dzora' pazasi pechidzitiro chako.
Maitiro ekuratidza mafoto ako nezuva, vhiki / mwedzi kana gore muApple Photos
Iyo Raibhurari chikamu cheapp chinoratidza mafoto ako masikati, vhiki / mwedzi kana gore. Zvinoenderana nekuti mapikicha mangani aunawo kwerimwe vhiki kana mwedzi kuti achaonekwa sei. Iwe uchaona zuva, mwedzi uye gore tebhu pazasi pechiratidziro chako kana uri muLibhurari tebhu.
Vhura Apple Mapikicha> Tinya paLibhurari tebhu pazasi kuruboshwe> Tinya pazuva, mwedzi kana gore. Izvi zvinokutora iwe kune zuva nezuva, vhiki / pamwedzi kana gore negore maonero emifananidzo yako zvichienderana nekuti ndeipi tab yaunosarudza. Sarudza 'Mapikicha Ese' kubva mubhawa kuti udzokere kunoona mafoto ako ese.
Apple Mapikicha ekugadzirisa matipi uye matipi
Maitiro ekugadzirisa sei foto muApple Photos
Zviri nyore kugadzirisa foto muApps app, kunyangwe iwe uchida kutenderera zvishoma, kuishandura kuita dema uye chena, kana kushandura akawanda marongero.
Vhura iyo Photos app> Tinya paLibhurari tebhu pazasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tinya pamufananidzo waunoda kugadzirisa> Dzvanya 'Gadzirisa' kumusoro kurudyi kwechidzitiro chako. Sarudzo dzekugadzirisa dzinozoonekwa pazasi pechidzitiro chako pasi pemufananidzo. Ita shuwa kuti wadzvanya 'Done' kana wapedza.
Maitiro ekudyara kana kutenderedza mufananidzo muApple Photos
Vhura iyo Mapikicha app> Tinya paLibhurari tebhu pazasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tinya pamufananidzo waunoda kugadzirisa> Dzvanya 'Rongedza' kumusoro kurudyi kwechidzitiro chako> Tinya pane chikwere icon nemiseve iri pazasi. yescreen yako > Gadzirisa zvinoenderana.
Maitiro ekushandura foto kuita dema uye chena muApple Photos
Pane nzira dzakati wandei dzekushandura foto kuti ive nhema uye chena, ine mazinga akasiyana ekutonga.
Nzira iri nyore ndeyekuvhura iyo Photos app> Tinya paLibhurari tebhu pazasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tinya pamufananidzo waunoda kugadzirisa> Dzvanya 'Rongedza' kumusoro kurudyi kwechidzitiro chako> Tinya pane matatu madenderedzwa icon. pazasi pechidzitiro chako> Shamba uchienda kune nhema nechena sarudzo.
Neimwe nzira, vhura iyo Photos app> Tinya paLibhurari tebhu pazasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tinya pamufananidzo waunoda kugadzirisa> Dzvanya 'Gadzirisa' kumusoro kurudyi kwechidzitiro chako. Kubva pano, uchaona akati wandei ezvidhori pazasi pemufananidzo, zvichikutendera kuti ugadzirise zvinhu zvakaita sekuratidzwa, musiyano, kupenya, ruvara, nezvimwe. Tamba uchitenderedza kusvika wawana mhedzisiro yaunoda.
Maitiro ekuisa sefa kune foto muApple Photos
Vhura iyo Photos app> Tinya paLibhurari tebhu pazasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tinya pamufananidzo waunoda kugadzirisa> Dzvanya 'Rongedza' kumusoro kurudyi kwechidzitiro chako> Tinya pane matatu madenderedzwa icon pazasi peyako. skrini > Skroka kusvika wawana sefa yaunoda.
Maitiro ekugadzirisa ruvara, kuratidzwa, kupenya uye kuyera chiyero mumufananidzo muApple Photos
Iyo Photos app inokutendera iwe kugadzirisa mwenje chiyero chemufananidzo, chiyero chemavara, kuratidzwa, kupenya, mimvuri uye musiyano, pakati pezvimwe zvinhu.
Vhura iyo Photos app> Tinya paLibhurari tebhu pazasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tinya pamufananidzo waunoda kugadzirisa> Dzvanya 'Gadzirisa' kumusoro kurudyi kwechidzitiro chako. Kubva pano, akati wandei emifananidzo yakatenderedzwa ichaonekwa pazasi pemufananidzo. Kutenderera kurudyi kuenda kuruboshwe kunoburitsa zvimwe. Fambisa inotsvedza pazasi imwe neimwe icon kuti ugadzirise icho chaicho chinhu.
Maitiro ekudhirowa pamufananidzo muApple Photos
Vhura iyo Mapikicha app> Tinya paLibhurari tebhu pazasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tinya pamufananidzo waunoda kugadzirisa> Dzvanya 'Rongedza' kumusoro kurudyi kwechidzitiro chako> Tinya peni kumusoro kurudyi kwechiratidziro chako. > Iwe unogona ipapo kuwedzera akasiyana-siyana manyorero echinyoreso mitsetse kumufananidzo wako.
Maitiro ekugadzirisa otomatiki mufananidzo muApple Photos
Vhura iyo Photos app> Tinya paLibhurari tebhu pazasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tinya pamufananidzo waunoda kugadzirisa> Dzvanya 'Rongedza' kumusoro kurudyi kwechidzitiro chako> Tinya denderedzwa remashiripiti icon pasi pemufananidzo> Dzvanya. Zvaita.
Maitiro ekusarudza imwe foto kubva kune Live Photo muApple Photos
Mapikicha epamoyo anotora masekonzi akati wandei usati uye mushure mekudzvanya bhatani rekuvhara, uine chinangwa chekutora yakanyanya kupfura. Apple inobva yasarudza kuti ndeipi furemu yainofunga kuti ndiyo yakanakisa sarudzo asi iwe unogona kusarudza yakasiyana ichiri iyo yakanakisa foto kana iwe uchifunga zvakasiyana.
Vhura iyo Mapikicha app> Sarudza iyo Live Photo yaunoda kugadzirisa> Tinya 'Gadzirisa' mukona yekurudyi> Tinya pane Live icon pazasi kana skrini yako (iyo ine madenderedzwa matatu mukati memumwe nemumwe)> Mupumburu pakati pezvimire. pazasi pemufananidzo> Dzvanya 'Ita Kiyi Mufananidzo'> Waita.
Iwe unogona zvakare kudzima Live nekudzvanya Rarama kumusoro kwemufananidzo kana uri paLive editing icon. Kana yaiswa muyero, Live inobatidzwa. Zvinozoti iva nemutsara kuburikidza neLive kana wabudirira kudzima Live.
Maitiro ekuchengetedza pikicha mhenyu sevhidhiyo
Unogona kuchengetedza Live Photo sevhidhiyo kuti usabatike pasi pamufananidzo kuti uione ichifamba.
Vhura iyo Mapikicha app> Vhura iyo Live Mufananidzo waunoda kuchengetedza sevhidhiyo> Tinya pane yekugovana icon pakona yepasi kuruboshwe (square ine museve)> Tinya paChengetedza seVhidhiyo. Inobva yachengeta iyo Live Photo sevhidhiyo yakaparadzana, saka unenge uine zvese Live Photo uye vhidhiyo muRaibhurari Yemifananidzo.
Apple Photos Memories matipi uye matipi
Maitiro ekugadzira Memory Movie muApple Photos
Iyo Photos app ichagadzira bhaisikopo reseti yemifananidzo, ingave muzuva, vhiki / mwedzi kana gore. Chinhu chikuru chezororo, semuenzaniso, kukwevera pamwe chete inoyevedza yemifananidzo yako muvhidhiyo iri nyore kuona.
Vhura iyo Photos app> Tinya paLibhurari tebhu pazasi kuruboshwe> Tinya pazuva, mwedzi kana gore> Tsvaga kusarudzwa kwemifananidzo yaunoda kugadzira bhaisikopo re> Tinya pane matatu madoti ari kumusoro kurudyi kwemifananidzo yakasarudzwa. > Ridza Memory Vhidhiyo.
Maitiro ekugadzirisa Memory Movie muApple Photos
Zvinogoneka kugadzirisa bhaisikopo rakagadzirwa neApple Photos. Iwe unogona kusarudza mapfupi, epakati kana kureba, pamwe neakasiyana mamodhi emimhanzi yakasiyana. Iwe unogona zvakare kuinyora kubva kunzvimbo iyo ichadaidzwa nekusarudzika uye unogona kushandura iyo mifananidzo inoshandiswa kana iwe ukawedzera iyo bhaisikopo kuMemories yako kutanga.
Tevedzera mirairo iri pamusoro kuti ugadzire bhaisikopo> Wobva wadzvanya kamwe chete pabhaisikopo pairi kutamba> Shandura kureba uye mapikicha nekudzvanya pamadotsi matatu ari kumusoro kurudyi kona.
Iwe unogona zvakare kusarudza akasiyana mafoto, kuviga mafoto uye sarudza kiyi foto kubva kune matatu madhidhi.
Maitiro ekushandura mimhanzi uye kutarisa kweMemory Vhidhiyo muApple Photos
Apple ine chinhu chinodaidzwa kuti Memory Mix muApple Photos iyo inokutendera iwe kuti usarudze Memory Tarisa uye sarudza inoperekedza mimhanzi kubva kuApple Music yeMemory Vhidhiyo yako.
Kana uchinge wava neMemory Vhidhiyo yako, tora kamwe chete painotanga kutamba uye uchaona rwiyo rwemumhanzi rune nyenyedzi pazasi kuruboshwe. Tinya bhatani uye wobva wadzvanya pachiratidzo nemadenderedzwa matatu kuti uchinje chitarisiko uye shandisa sefa kumifananidzo iri mufirimu.
Kuti uchinje mumhanzi, dzvanya pakanzi kane “+” chiratidzo uye uchawana mazano epamusoro, pamwe chete nemimwe mimhanzi yaungave wakafarira uye yaungade kusarudzira bhaisikopo rako.
Iwe unogona zvakare kungotsvaira kuburikidza neMemory Mix sarudzo.
Maitiro ekugovera Memory Movie muApple Photos
Kana uchinge wafara nebhaisikopo rako uye wapedza kugadzirisa mazita nemifananidzo nemimhanzi nezvimwe, unogona kugovera bhaisikopo rako kuburikidza neakajairwa maapplication nemasevhisi.
Mushure mekunge warova 'Zvaita' pabhaisikopo rako, iwe unozodzoserwa kuchiratidziro nebhaisikopo rako uye neMemory Mix sarudzo. Mukona yepamusoro yekurudyi pane Govera icon - bhokisi resikweya rine museve wakanongedza kumusoro.
Tinya paGovera icon, inoteverwa nesevhisi yaunoda kushandisa kugovera, ingave iri AirDrop, Mameseji, Akagovanwa MaAlbum muMapikicha - zvimwe pane ari mudiki - WhatsApp, Facebook, nezvimwe. Bhaisikopo rinobva ratumirwa kunze seYakazara. HD faira uye iwe unogona kugovera kure.
Maitiro ekudzima Memory muApple Photos
Chero ndangariro dzaunowedzera dzinoonekwa kumusoro kweKwako tebhu, asi iwe uchaonawo dzimwe ndangariro dzakagadzirirwa iwewo, dzakadai seYakanakisa Mwedzi Wapfuura, Yakanakisa Yekupedzisira Mavhiki mana uye PaZuva Rino. Unogona kudzima chero zvausingade kurangarira zvakadaro.
Vhura Mapikicha> Tinya pane Yako tebhu> Tinya pane Memory yaunoda kudzima> Tinya pane matatu madhidhi ari mudenderedzwa rebhuruu kumusoro kurudyi kwechidzitiro chako> Delete Memory.
Maitiro ekufarira Memory muApple Photos
Dzimwe Ndangariro dzinogona kunyanya kukosha kwauri, semuenzaniso muchato wako, zuva rekuzvarwa, zuva rekuzvarwa kwemwana nezvimwe. Kune idzo ndangariro dzakakosha, unogona kudzifarira.
Vhura Mapikicha> Tinya pane For You tab> Tinya pane Memory yaunoda Kuwedzera kune Yaunofarira Memory> Tinya pamwoyo kuti ufarire ndangariro.
Maitiro ekubvisa Memory kubva kune ako aunofarira Memories muApple Photos
Kana iwe wakawedzera imwe ndangariro kuYako Yaunofarira Memories asi wozofunga kuti hauchadi kuyeuchidzwa nezvayo zvakare, unogona kubvisa Memories kubva kune Zvaunofarira Memories.
Vhura Mapikicha> Tinya pane For You tebhu> Tinya pamwoyo paMemory yaunoda kubvisa seyeuko yaunofarira.
Maitiro ekudzima foto kubva kuMemory muApple Photos
Memory mukati meFor You tab inogona kunge iine makumi maviri emifananidzo mikuru kubva pachiitiko asi akati wandei akaipa ausingade muMemory Movie. Usanetseke zvakadaro, unogona kudzima mafoto ega kubva kuMemory.
Vhura Mapikicha> Tinya pane Yako tebhu> Tinya paMemory yauri kuda kugadzirisa> Tinya kamwe chete pandangariro painotanga kutamba> Rova denderedzwa nemadoti matatu kumusoro kurudyi> Sarudza Tonga Mapikicha> Tiki kana kusunungura mafoto. unoda kuoneka mubhaisikopo, kana kuti haudi kuoneka.
Apple Photos Mapikicha matipi uye matipi
Maitiro ekuona Akagoverwa Album chiitiko muApple Photos
Vhura iyo Photos app> Tinya pane For You tebhu pazasi> Skroka pasi kune Akagoverwa Albums. Svetera kubva kurudyi kuenda kuruboshwe kuti utore mapikicha achangoburwa kune chero Akagoverwa Albums.
Dzvanya 'Ona Zvese' pamusoro pemapikicha ari padivi peAkagoverwa Album Chiitiko kurudyi kuti uone zviitiko zvese mukati meAkagovanwa MaAlbum uye upe chaiyo mafoto zvigunwe kumusoro. Iwe unogona zvakare kubaya pikicha muchikamu chakagoverwa Album Chiitiko kuti uone zvese zviitiko uye kuwedzera makomendi.
Maitiro ekuwedzera mafoto kuAlbum muApple Photos
Pane nzira mbiri dzekuwedzera mafoto kuAlbum iripo. Izvo zvakare zvinogoneka kuzviita kuburikidza nefoto pachayo. Heano maitiro ekuzviita kubva kuAlbum tab.
Vhura iyo Photos app> Dzvanya paAlbum tab> Tinya paAlbum yaunoda kuwedzera foto ku> Dzvanya iyo "+" pazasi pealbum> Sarudza mafoto aunoda kuwedzera kuAlbum yako> Dzvanya 'Waita'. .
Neimwe nzira, vhura Apple Mapikicha> Tinya paLibhurari tebhu pazasi kuruboshwe> Tinya Sarudza mukona yekurudyi> Sarudza mafoto aunoda kuwedzera kune nyowani kana iripo albhamu> Dzvanya iyo Govera icon pazasi kuruboshwe rwechidzitiro chako> Skira pasi ku'Wedzera kuAlbum'> Sarudza iyo iripo albhamu kana kudzvanya New Album.
Kana ukasarudza New Album, unofanira kuitumidza uye worova Sevha.
Maitiro ekubvisa mafoto kubva kuAlbum muApple Photos
Vhura iyo Photos app> Dzvanya paAlbum tabhu> Tinya paAlbum yauri kuda kubvisa foto kubva> Dzvanya 'Sarudza' mukona yekurudyi yechidzitiro chako> Sarudza mafoto auri kuda kubvisa> Dzvanya bhini icon mu pazasi kurudyi kwechidzitiro chako> Bvisa kubva kuAlbum.
Mufananidzo wacho ucharamba uri muraibhurari yako asi unobviswa mualbum yako. Iwe unogona kusarudza kudzima kana iwe uchida kuibvisa kubva kune yako albhamu uye raibhurari.
Maitiro ekudzima sei Album yese muApple Photos
Vhura iyo Mapikicha app> Dzvanya paAlbum tabhu> Dzvanya 'Ona Zvese'> Tinya 'Rongedza' mukona yekurudyi> Dzvanya denderedzwa dzvuku nemutsara uri kumusoro kuruboshwe kwealbum raunoda kudzima> Delete Album.
Maitiro ekugadzira iyo nyowani Album kana Shared Album muApple Photos
Pane nzira mbiri dzakasiyana dzekugadzira iyo album nyowani. Unogona kuzviita nekusarudza mafoto aunoda kuisa mualbum, kana iwe unogona kugadzira iyo albhamu wobva wawedzera mafoto kwairi.
Iyo yekupedzisira nzira inoda kuti iwe uvhure iyo Photos app> Dzvanya paAlbum tabhu> Dzvanya iyo '+' mukona yepamusoro kuruboshwe> Sarudza 'Itsva Album' kana 'Itsva Yakagoverwa Album'> Zita Album yako.
Paunenge uchigadzira Nyowani Yakagovaniswa Album, iwe uchave nesarudzo yekuwedzera mazita aunoda kugovera iyo albhamu, mushure mezvo iwe unozofanirwa kurova Gadzira. Kune yakajairwa Album nyowani, unoitumidza wobva wadzvanya Save, mushure mezvo unogona kuwedzera mafoto kwairi wodzvanya Done.
Maitiro ekubvisa Akagovaniswa Album muApple Photos
Vhura iyo Mapikicha app> Tinya pane iyo Albums tebhu> Skire pasi kune Akagova Albums> Sarudza 'Ona Zvese' mukona yekurudyi yechikamu> Tinya 'Rongedza' mukona yepamusoro yekurudyi yechiratidziro chako> Tinya padenderedzwa dzvuku ne mutsara pakati nechekuruboshwe pakona yeAkagoverwa Album yaunoda kudzima> Delete.
Apple Mapikicha Vanhu & Nzvimbo matipi uye mateki
Maitiro ekuona mafoto ako pamepu muApple Photos
Apple Mapikicha anotendera iwe kuti uone mafoto ako pamepu kuti utarise kwawanga uri uye nekwawakatora mafoto. Zvinorevawo kuti unogona kukurumidza kuwana mapikicha awakatora pazororo rako kuNew York, semuenzaniso.
Vhura Apple Mapikicha> Tinya pane iyo Albums tebhu> Skira pasi kuVanhu & Nzvimbo> Tinya paNzvimbo> Unobva wakwanisa kutenderera mepu yenyika. Kwese kwawakatora mafoto nefoni yako inozoonekwa muguta rakasiyana.
Maitiro ekubatanidza mafoto nevanhu muApple Photos
Apple Mapikicha anozoziva vanhu mumifananidzo yako, achivadhonzera muPeople & Nzvimbo chikamu kwauchazokwanisa kuvanyora. Yakanakira kana zvasvika pakutsvaga, zvichikubvumidza kuti utsvage 'Amai' kana zita remumwe wako uye kuona mifananidzo yese muraibhurari yako nayo mairi.
Vhura iyo Mapikicha app> Tinya pane iyo Albums tebhu> Skira pasi kuVanhu & Nzvimbo> Tinya paVanhu. Makadhi akati wandei achange ari pano ane zviso paari. Tinya pakadhi rine munhu waunoda kunyora> Dzvanya 'Wedzera Zita' pamusoro pechidzitiro chako> Nyora zita remunhu> Sarudza munhu kubva pane yako yekufonera runyorwa.
Kana paine mamwe mafoto ayo Apple anofunga kuti ndiye munhu mumwechete asi isati yaasimbisa, aya anozoonekwa. Rega kusarudza chero mapikicha asiri iye munhu ari mubvunzo uye tinya 'Zvaita'.
Maitiro ekusimbisa mamwe mafoto emunhu akamaka muApple Photos
Vhura iyo Photos app> Tinya pane iyo Albums tebhu> Skira pasi kune Vanhu & Nzvimbo> Tinya paVanhu> Tinya pamunhu waunoda kutarisa mamwe mafoto. Kana paine mamwe mafoto anoda kuongororwa, bhatani richaonekwa kumusoro. Tinya Ongororo> Sarudza 'ese mafoto emunhu iyeye uye tinya pa Confirm.
Maitiro ekufarira munhu mukati meVanhu & Nzvimbo muApple Photos
Unogona kunge uine vanhu vakawanda vakachengetwa mukati meVanhu & Nzvimbo chikamu chako. Iwo akarongeka alfabheti, zvinoreva kuti mumwe wako kana mwana anogona kunge ari pasi pasi pane zvaungada. Usanetseke zvakadaro, unogona kuvafarira kuti uvaise pamusoro pechinyorwa paunorova chikamu cheVanhu.
Vhura iyo Mapikicha app> Tinya pane iyo Albums tebhu> Skira pasi kuVanhu & Nzvimbo> Tinya paVanhu> Bata mwoyo uri pakadhi remunhu waunoda kufarira.
Maitiro ekubvisa munhu kubva kune yako People Albums muApple Photos
Vhura iyo Mapikicha app> Tinya pane iyo Albums tebhu> Skira pasi kune Vanhu & Nzvimbo> Tinya paVanhu> Tinya pamunhu wauri kuda kubvisa> Tinya pamadotsi matatu ari mudenderedzwa pakona yekurudyi> Bvisa [Zita reMunhu. ] kubva kuvanhu.
Maitiro ekubatanidza vanhu muVanhu vako Albums muApple Photos
Vhura iyo Mapikicha app> Tinya pane iyo Albums tebhu> Skira pasi kune Vanhu & Nzvimbo> Tinya paVanhu> Dzvanya 'Sarudza' mukona yekurudyi> Sarudza makadhi evanhu vaunoda kubatanidza> Dzvanya 'Sanganisa' mukona. pasi pekona yekurudyi.
Apple Photos Tsvaga matipi uye matipi
Basa rekutsvaga paApple Photos rinokutendera kuti utsvage mafoto ako nekunyora muzvinhu zvakaita se'Holiday' kana 'Concert', asi unogona zvakare kutsvaga neVanhu neNzvimbo futi.
Maitiro ekushandisa Tsvaga muApple Photos
Vhura iyo Photos app, tinya paKutsvaga tebhu pazasi kurudyi uye tanga nekutsvaga chimwe chinhu chine chekuita nemufananidzo wauri kutsvaga mubhawa yekutsvaga kumusoro. Unogona kurangarira yaive munightclub, kana pazuva rako rekuzvarwa semuenzaniso.
Zvikamu zvinoonekwa pasi pesearch bar, senge 'Baby', 'Zhizha', '2017', uye mapoka ese aya ane nhamba padivi pawo inoenderana nenhamba yemifananidzo iri muchikamu ichocho zvinoenderana nezwi rekutsvaga rawashandisa.
Vanhu vanoonekwawo muzvikamu saka unogona kutsvaga 'Concert' uye unogona kunge waenda neshamwari yako 'Lucy'. Kana paive nemufananidzo wako naLucy muri mese, unouwana kana ukabaya zita raLucy pamusoro pezvikamu.
Iwe unogona zvakare kutsvaga vanhu zvakananga mubhawa yekutsvaga zvakare, kana nzvimbo uye mafoto ese ari muraibhurari yako ane chekuita nemunhu kana nzvimbo yawakatsvaga ichaonekwa.
Izvo zvakakoshawo kucherechedza kuti iwe unogona kusarudza akati wandei mapoka ekutsvaga bha - zvakafanana nekusarudza kwaunosarudza email kero kana uchitumira email - uye ivo vanozoonekwa mubhawa yekutsvaga kumusoro padivi peumwe neumwe, ichipfupisa kutsvaga.
Semuyenzaniso, unogona kutsvaga zita remumwe wako, worisarudza kana richibuda muzvikamu zviri pazasi, wonyora kuti 'Baby', wosarudza izvozvo kubva muzvikamu, wonyora 'Zhizha' wosarudza izvozvo. Waibva wadzvanya Search muzasi mekurudyi kwechidzitiro chako wobva wawana chero mapikicha emumwe wako aine mwana muchirimo achidzoka. Zvakanakisa.
Kana iwe usingade kushandisa bhaa yekutsvaga, unogona kupeta pasi tebhu yekutsvaga uye iwe unowana chikamu cheVanhu chaunogona swipe zvakadaro, pamwe neNzvimbo, Zvikamu uye Mapoka.
Maitiro ekubvisa yako yazvino nhoroondo yekutsvaga muApple Photos
Vhura iyo Mapikicha app> Tinya paKutsvaga tebhu> Skroka kusvika pazasi apo iwe unobaya Ichangobva Kutsvaga chikamu> Tinya Bvisa kurudyi.
Instagram Nyaya matipi uye manomano: Iwo wekupedzisira gwara revatambi venhau